"Lionel Messi Kuma Hadlo English-ka, Waxba Kamaan Fahmin Wixii Uu Ii Sheegay" Saxeexa Cusub Ee Barcelona Ee Dest Oo Sheeko Xiiso Leh Ka Warramay - Gool24.Net
“Lionel Messi Kuma Hadlo English-ka, Waxba Kamaan Fahmin Wixii Uu Ii Sheegay” Saxeexa Cusub Ee Barcelona Ee Dest Oo Sheeko Xiiso Leh Ka Warramay
Da’yarka ah saxeexa cusub ee kooxda Barcelona ee Sergino Dest ayaa ka hadlay sidii uu u fahmi waayay kabtanka kooxdiisa ee Lionel Messi xilli uu kulankiisii koowaad ee kooxdaas ciyaaray xalay oo ay bar-bardhac 1-1 ah la galeen kooxda Sevilla.
Barcelona ayaa toddobaadkii hore la saxeexatay Sergino oo ay 25 Milyan oo euro kaga soo heleen kooxda uu akaademigeeda kasoo baxay ee Ajax.
19 sano jirkan ree Maraykan ayaa dalab xoogan ka helay kooxda ree Germany ee Bayern Munich oo uu xataa mar heshiiska shaqsiga ah la gaadhay balse waxa uu ugu dambayn doortay Barcelona sababtoo ah si uu ula ciyaaro Messi.
Saxeexa Dest ayay Barcelona soo bandhigtay Jimcihii halka uu xalay kulankiisii ugu horreeyay bedel ku yimid markii uu Jordi Alba dhaawac uga baxay kulankii Sevilla daqiiqadii 75-aad ee kulanka.
Haddaba, kaddib kulankii xalay ayuu Dest shaaca ka qaaday in kabtanka kooxdiisa ee Lionel Messi uusan ku hadal luuqada inta badan la isku fahmo ee English-ka isla markaana uusan waxba ka fahmin wixii uu u sheegay oo dhan.
Dest ayaa sheegay inuusan gabi ahaanba wax aragti ah ka haysan dhammaan wixii uu Leo u sheegay balse ay waxkasta fiicnaan doonaan inta ay wada qoslayaan.
19 sano jirkaas oo ka hadlaya arrintaas ayaa yidhi “Waxkasta waan arkay maanta Messi ayaana kamid ah, Argentines-ku kuma hadlo English, laakiin wax khaas ah ayay ahayd inaan la kulmo”
“Daacad ayaan u hadlayaa, anigu wax aragti ah kama haysto wixii uu ii sheegay, laakiin ilaa inta aanu labadayaduba wada qoslayno waxkasta waxay ahaan doonaan kuwo wanaagsan”